रुद्राक्षले बनाउछ मानिसलाई चमत्कारीक सफल : तपाईँको सफलताका लागि कुन रुद्राक्ष हुन्छ राम्रो ? :: पूरा पढ्नु होस तपाई दंग पर्नुहुनेछ - Daily Lokmandu
Homeरोचकरुद्राक्षले बनाउछ मानिसलाई चमत्कारीक सफल : तपाईँको सफलताका लागि कुन रुद्राक्ष हुन्छ राम्रो ? :: पूरा पढ्नु होस तपाई दंग पर्नुहुनेछ
रुद्राक्षले बनाउछ मानिसलाई चमत्कारीक सफल : तपाईँको सफलताका लागि कुन रुद्राक्ष हुन्छ राम्रो ? :: पूरा पढ्नु होस तपाई दंग पर्नुहुनेछ
August 10, 2018 रोचक Comments Off on रुद्राक्षले बनाउछ मानिसलाई चमत्कारीक सफल : तपाईँको सफलताका लागि कुन रुद्राक्ष हुन्छ राम्रो ? :: पूरा पढ्नु होस तपाई दंग पर्नुहुनेछ
जीवनमा सफलता पाउनको लागी, धेरै व्यक्तिले महंगा रत्नलाई लगाउने गर्दछन । तर यदि तपाईं चाहानुहुन्छ कि तपाईं पनि सफल हौं तपाइँको यस सपनालाई पुरा गर्नेछ रुद्राक्षले, तपाइँले यसबाट सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । आउनुहोस जानौं ज्योतिषशात्रका अनुसार कुन क्षेत्रका व्यक्तिको लागि कुन रुद्राक्ष फलदायी सावित हुन्छ ।
१ यो रुद्राक्षले तपाईंलाई मदत गर्नेछ
वकील, न्यायाधीश या अदालत मा काम गर्ने मान्छेले र १ , ५ र १३ रुद्राक्ष को प्रयोग गर्नु फलदायक हुन्छ । प्रशासनिक अधिकारी, प्रहरी वा सरकारको कुनै पनि विभागमा सफल हुन भने ९ र १३ शुभ हुने देखिएको छ।
२ वित्त विभागमा भएका व्यक्तिहरुका लागि
वित्तीय क्षेत्रमा बैंकका कर्मचारीहरू, चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स, सरकारी वित्त विभाग आदि जस्ता सफल भविष्यको लागि, तपाईंलाई ८ , ११ , १२ र १३ रुद्राक्ष लगाउनु राम्रो हुन्छ ।
३ चिकित्साका लागि
चिकित्सा क्षेत्रमा नाम कमाउनको लागि, तपाईंले ३ , ४ , ९ , १० , ११ , १२ , १४ रुद्राक्षको सामना गर्नु पर्दछ। यसले तपाईंको जीवनमा सफलता ल्याउनेछ, तर तपाईंको स्वास्थ्यलाई पनि लाभ पुऱ्याउँनेछ । व्यापारिक क्षेत्रसँग जोडिएमा व्यक्तिहरुका लागि १ ,७ र १० को रुद्राक्ष्को लगाउदाँ कारोबार फलदायक बन्ने देखिन्छ ।
४ वायु सँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको लागि
वायु फोर्स र यससँग सम्बद्ध कर्मचारीहरू र पाइलटले १० र ११ अनुहार रूद्राक्षबाट सफलता प्राप्त गर्न सक्छन । साथै, ठेकेदारहरू सित सम्बन्धित व्यक्तिहरूले रुद्राक्ष ११ , १३ र १४ मा लिनुपर्छ।
५ शिक्षा सँग जोडीएका हरुको लागि
शिक्षा क्षेत्रमा जोडिएका व्यक्तिका लागि रुद्राक्ष ६ र १४ सम्मको हुनुपर्छ। यसले केवल तपाईंलाई जीवनमा नयाँ गति दिनेछैन,बल्की तपाँइलाई महान् सम्मान पनि प्राप्त गराउनेछ । बच्चाहरु र विद्यार्थीहरु गणेश रुद्राक्ष पनि लगाउन सक्छन।
६ राजनीति सम्बन्धी व्यक्तिहरूका लागि
यदि तपाईं राजनीतिसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ वा राजनीतिमा आउन चाहानुहुन्छ भने रुद्राक्ष तपाईंले १ , १३ र १४ कायम राख्नुपर्दछ। साथै, उद्योगपतिहरूले रुद्राक्षहरूको सामना गर्नु पर्छ १२ र १४ ले।
७ होटल व्यवसायका लागि
यदि तपाईं व्यापार वा सामान्य व्यापारीमा आउन चाहानुहुन्छ वा पहिले नै काम गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ भविष्य बनाउनको लागि रुद्रक्षा १० , १३ र १४ घुमाउनुपर्छ। होटल व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्मचारीका रुद्राक्ष १ , १३ , १४ अनुहारमा राख्नुपर्छ।
८ प्रविधीसँग जोडिएको व्यक्तिहरूको लागि
टेक्नोलोजीमा संलग्न व्यक्तिहरूका लागि, ७,८,९,१०,११ अनुहार रुद्राक पहिरन सक्दछ। यस रुद्रक्षा को पकडे पछि, मान्छे केवल आफ्नो क्षेत्र मा सफल हुनेछ, साथैं तपाइको नयाँ प्रयोगहरु पनि सफल हुनेछ। तपाईंले भोलि आउने सबै समस्याहरू संग छुटकारा पाउनुहुनेछ।
घरमा दियो बाल्दा यो दिशामा बाल्नुहोस, शुभ मात्रा होइन आयु समेत बढ्छ :: पूरा पढ्नु होस ।।
बालकको अपहरण गर्नेलाई इन्काउन्टरमै मारिएको हो,फेक इन्काउन्टर हैन इन्काउन्टर नै हो-गृहमन्त्री थापा [भिडियो सहित ]
नागको अन्डा देख्ने मान्छे भाग्यमानी हुन्छ रे ! तपाई पनि यो भिडियो हेर्नुस अनि शेयर गर्नुस !! (1,378)
यो भिडियो हेरेपछि कसको आखामा आसु आउदैन होला (भिडियो सहित) (1,345)
पोखराका इञ्जिनियर सन्दीप गुरुङ विश्वमै प्रथम ! सम्मान स्वरूप लाइक, कमेन्ट र सेयर गरौं (1,187)
बुधबारको दिनमा श्रीकेदारनाथ मन्दिरलाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर २०७५ माघ २ गते बुधबारको… (1,159)
‘नेपालमै खनिखोस्री गरी खाउ, मलेसिया नआउ’…सक्दो शेयर गरौ (1,046)
२०७६ को पात्रो माघ १५ गतेभित्र बजारमा आउदै, बिदा बारे यस्तो छ निर्णय (639)
३३ काेटी देउताकाे दर्शन गरेर भेटी स्वरुप एक एक शेयर गर्दै बि.सं. २०७५ माघ महिनाको [मासिक… (636)
Wow…हात खुट्टा गुमाएका कृष्णको ‘राधा’ बनेर आईन रुकुमकी रुपा ! सबैलाइ प्रेरणा मिलोस… (13,048)
निर्मला पन्तको हत्या प्रकरण ! निर्मलाको बुवा माथि शंका ! किन मान्दैनन् रगत दिन ? खास कारण… (10,488)